बाल नक्काशी के हो
शब्द "नक्काशी" विभिन्न क्षेत्रहरू प्रयोग गरिन्छ। दोकान बाल नक्काशी को कला को अवधारणा बख्शते हालतमा प्रयोग गरे एक पर्म समावेश छ। यो प्रभाव घटक दबाइ र बाटो रासायनिक संरचना देखि अलग छ। समाधान आन्तरिक प्रभावित बिना केवल कपाल को माथिल्लो तहमा कार्य। त्यसैले, यो विधि कर्लिंग बाल लागि कम दर्दनाक छ। घुम्रेको कपाल 8 हप्ता सम्म संरक्षित गरिएको छ। यसलाई बिस्तारै जस्तै, आफ्नो आकार र रूप बाल नष्ट दाढी छैन, टाढा जान्छ एक रासायनिक लहर।
जसले बाल नक्काशी बनाउन सक्छ
पर्म बाल कुँद्ने प्रक्रिया को मद्दतले मध्यम वा छोटो कपाल सबै महिलाहरु को लागि गर्न सकिन्छ। तथापि, तपाईं skhie भने, सुझावहरू कटौती जुन क्षतिग्रस्त बाल, तिनीहरूले पहिलो विशेष चिकित्सा मास्क संग क्रममा ल्याए र कर्ल को अन्त्य ट्रिम गर्नुपर्छ। यो सुनिश्चित गर्नेछ दीर्घकालीन थाकबनाउदै र सुन्दर कर्ल।
चिल्लो लागेको बाल, त्यसको विपरीत, आफ्नो स्वास्थ्य, यो एक सानो dries बाल wave रूपमा सुधार।
तपाईं गर्भवती र lactating महिलाहरु कुँद्ने बाल गर्न सक्नुहुन्न, साथै महिनावारी समयमा र शक्तिशाली चिकित्सकीय लागूपदार्थ प्राप्त। महिलाहरु-एलर्जी पीडित भएको निरूपण घटक को सहिष्णुता मा एक परीक्षण गर्न सल्लाह छन्।
साथै, अक्सर discolored वा meliruyutsya छन् जो दीर्घकालीन पर्म बालिका, सिफारिस छैन।
बाल नक्काशी कसरी बनाउने
नक्काशी बाहिर छ विभिन्न प्रयोग रोलर्स (Boomerang, ठूलो, पातलो, रोलर्स, आदि)। को सैलून मा सम्पूर्ण निर्देशिका नक्काशी-Hairstyles छन्। मास्टर ग्राहक को राज्य र कर्ल प्रकार assesses र प्रक्रिया पछि कपाल को हेरविचार लागि सबैभन्दा उपयुक्त संरचना, को curlers को आकार र उपकरण प्रदान गर्दछ।
प्रक्रिया नै करिब आधा एक घण्टा लाग्छ। विशेषज्ञ curlers मा बाल हावा, र त्यसपछि कुँद्ने लागि संरचना पैदा। समय ढिलाइ देखि प्रतिरोध को परिणाम निर्भर गर्दछ। त्यसपछि हजामको कपाल राम्ररी धोएर र सुकेको।
केश चोट छैन क्रममा, यो सिद्ध सैलून लागू गर्न राम्रो छ।
को नक्काशी लाभ
कुँद्ने कपाल (फोटो), कार्य बख्शते साथै बाल neatness र पूर्णता दिन्छ। shampooing पछि, तपाईं नयाँ केश बहाना गर्न सक्नुहुन्छ: कर्ल भिजेको कपाल को प्रभाव सिर्जना गर्न वा haircuts रचनात्मक अराजकता दिन, खींच बाल, छोड्नुहोस्। तिनीहरूले आकार र आकार, र बाल नरम मा भिन्न छन् रूपमा संग नक्काशी कर्ल, प्राकृतिक हेर्न।
हेयर केयर कुँद्ने पछि
लामो स्थापना प्रक्रिया पछि कुनै पनि विशेष हेरविचार आवश्यकता छैन। तपाईं एक बाल हाय बिना परिचित उपकरण, हावा मा राम्रो सुकाउने प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ धुन र आफ्नो बाल सुक्खामा। यो मइस्चराइजिंग र एजेन्ट कम प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ। 72 घण्टा अमोनिया बिना पेंट पछि Staining सम्भव छ।
हुनत बाल yavlyaetya atraumatic प्रक्रिया कुँद्ने3महिना को एक ब्रेक लिनुपर्छ। यो बाल ठीक गर्न अनुमति दिन्छ।
कुँद्ने संग तपाईं सपना र एक असामान्य तरिका संग आउन सक्नुहुन्छ। फोम कर्ल पनि जेल एक सिर्जना, फरक आकार, आफ्नो फिक्स स्प्रे दिन्छ भिजेको प्रभाव। सशक्त हुन र आफ्नो भव्य बाल आनन्द!
खमीर मास्क: बाल को समीक्षा, आवेदन र प्रभावकारिता को सुविधाहरू
बाल सजावट लागि उत्कृष्ट - यो प्रविधी kanzashi गुलाब मा
Ghanaian स्ट्राइकर अब्दुल Uoris
कसरी आफ्नो फोनमा ई-मेल सिर्जना गर्न: शुरुआती लागि निर्देशन
Highchair CHICCO पोली - जीवन को अनुरूप
मस्तिष्क विकासको लागि व्यायाम। मस्तिष्क को विकास को लागि खेल
तारिङको लागि केबल क्रस सेक्शन कसरी छनौट गर्ने?
अनन्त किशोरी Karter हारून
होटल प्राग केन्द्र सुपीरियर3* (प्राग, चेक गणतन्त्र): समीक्षा, वर्णन र समीक्षा
पहिलो विश्व युद्ध को समयमा Brusilov सफलता अर्थ